Vaovao - Fampirantiana -Tech Iraisam-pirenena varavarankely sy fampirantiana varavarankely Mexico
2019 Fampirantiana -Tech iraisam-pirenena varavarankely sy fampiratiana varavarankely Mexico
Jona 2019 varavarana sy varavarankely iraisam-pirenena Mexico Fampirantiana Door & Windows MEXICO izay natao tany Mexico City. Ny fampirantiana koa dia mamiratra manerana ny firenena Afovoany sy Atsimo ary manome làlana fandrarahana varotra roa làlana ho an'ny indostria fitaratra any Mexico ary ireo firenena manodidina azy mankany Amerika Atsimo. Ny ekipa FOEN ao amin'ny sampana any ivelany dia nanao endrika tsara tamin'ny vahaolana vaovao novokarin'ny orinasa sy vahaolana amin'ny teknolojia sy varavarankely.
Ny Fujian Fenan Aluminum Co, Ltd dia naneho ny varavarankelin'ny rafitra sy ny varavarankeliny, miaraka amin'ny halehiben'ny rivotra, ny fahitana amin'ny fahandroana, ny fitrandrahana hafanana, ny fitrandrahana feo ary ny fampisehoana hafa marevaka hafa, ary koa ny fanoherana ny moka, ny halatra, ny fianjerana ary ny hafa fiasa mahery vaika. Nahatsikaritra renirano tsy misy farany momba ny mpandray anjara hitsidika ary hifanakalo hevitra. Anisany, tsy misy ny tsy fahatomombanan'ny vahiny omena voninahitra izay manome fankatoavana avo lenta amin'ny fanavaozana FOEN, ary mandrisika ny FOEN hanohy hatrany amin'ny fanahin'ny fanavaozana, manome anjara bebe kokoa amin'ny fampandrosoana amin'ny indostrian'ny varavarana sy varavarankely.
Foen dia miaraka amin'ny haitao & traikefa 32 taona, niorenantsika tamin'ny taona 1988 ho mpaninjara ny mombamomba aluminium. Nandritra ny folo taona voalohany, nandeha tamin'ny tsena sy traikefa mahery vaika izahay. Tamin'ny 1998, nanorina ny orinasa famokarana voalohany FOEN Stainless Steel ao Fuzhou City. Vita ny famokarana mombamomba an'i Fuqing Aluminium tamin'ny 2005. Tamin'ny taona 2012, nahazo ny mpamatsy mombamomba ny alumina ambony 20 isika tany Sina, tamin'ny 2013, nametraka ny tsipika anodisialy miorim-bidy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ho famokarana isika. Tamin'ny taona 2014, dia laharana faha-10 an'ny mpamatsy Aluminum any Chine. Tamin'ny taona 2015, apetraho amin'ny andrim-panjakana rafitra varavarankely. Tamin'ity taona 2016 ity, nahazo ny orinasa famokarana FOEN any Avaratra hiasa. Tamin'ny taona 2017, nisokatra ny rafitra varavarankely FOEN Art Gellary ary nanangana ny orinasa aluminiana Henan FOEN. Tamin'ity taona 2018 ity, dia nomena ireo marika 500 manan-danja sarobak'i Shina izahay. Amin'ity taona ity ny fananganana famokarana aluminium fahatelo dia amboarina.
Amin'ny ho avy, We FOEN, miaraka amin'ny fanavaozana sy ny fandrosoan'ny teknolojia vokatra, ny foto-kevitra sy ny fitantanana mandroso eran-tany mandrindra, manohiza ny fivoaran'ny tsena, manatsara hatrany ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa, ho an'ny fampandrosoana maharitra ny orinasa dia manome antoka mafy, Fujian Fenan Aluminium Co, Ltd dia hametraka fenitra marika avo kokoa amin'ny sehatra iraisam-pirenena midadasika.